» २४ वर्षका जवानसँग ८१ वर्षीय वृद्धले गरे विवाह !
२४ वर्षका जवानसँग ८१ वर्षीय वृद्धले गरे विवाह !
३० भाद्र २०७७, मंगलवार ०६:२३
भनिन्छ मायाँ भन्दा ठूलो कुरा संसारमा अरु केहि छैन । यो कुरा भर्खरैमात्र पुष्टि भएको छ । मायाँमा उमेर हेरिँदैन भन्ने कुरा पनि ८१ वर्षीय फिलिप क्लेमेन्ट्स २४ वर्षका फ्लोरिन मरीनको विवाहबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।
उनीहरुले सन् २०१७ मा जीवनसाथी चुनेका थिए । उनीहरुको दुबैको उमेर आकाश पातालको फरक छ । तर पनि उनीहरुले विवाह गर्ने फैसला गरे र सन् २०१७ मा विवाह गरेका थिए । अहिले फ्लिपको मृत्यु भईसकेको छ । तर उनको सम्पत्तीको हकदारका लागि असिहले उनका पति फ्लोरिन चर्चामा रहेका छन् ।
८१ वर्षको उमेरका मृत्यु भएका उनले आफ्नो सबै सम्पत्ती २४ वर्षीय जवान पतिको नाममा गरिदिए । जसका कारण अहिले विवाद शुरु भएको छ । अहिले उनका नातेदारहरुले फ्लोरिनले फ्लिपसँग सम्पत्तीको लोभमा मात्रै विवाह गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । फ्लोरिन रोमानियाका एक मोडल हुन् । फ्लिपले उनका पतिलाई १ करोड ४४ लाखको सम्पत्ती दिएका थिए ।